ဧရာဝတီ| January 10, 2013 | Hits:7,103
6 | | အပူငွေ့များ၊ အကြော်ညှော်နံ့များ၊ ဆူညံသံများနဲ့ ညစ်ညူးစရာ ရန်ကုန်မြို့လည်ရဲ့ အတွေ့အထိကို တွေ့ကြုံ ခံစားကြရ မှာပါပဲ။ ဒီလို စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေရဲ့ အဝေး ခဏတာလေး ဖြစ်ဖြစ် ဇိမ်ကျကျ အေးမြမြ လွတ်မြောက် နေရာလေး တခုကတော့ 50th Street လို့ ဘိုလိုခေါ်တဲ့ လမ်း ၅၀ ထဲက ကဖေးနဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပါ။
ကမ္ဘာကို ခြိမ်းခြောက်လာသော အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားပဲစီးသည့် ကနေဒါ သံအမတ်ကြီး ကတော်
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Lailun January 11, 2013 - 9:53 am	Okay. I will stop by tomorrow. Can you tell Thein Sein to meet me there? I want Corona with salt and lime. That’s it.